ကမြရဲ့နရောလေး: ကျမတို့ စားတဲ့ခေါက်ဆိန့် ခေါက်ဆွဲများ...
ကျမတို့ စားတဲ့ခေါက်ဆိန့် ခေါက်ဆွဲများ...
ကိုင်း..ဒီတခါတော့ စားစရာလေးတွေနဲ့ အာလူးပေးအုံးမယ်နော်..။ခေါက်ဆိန့် ဆိုတာကို ခပ်တုံးတုံးဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင် "ထမင်းအမျှင်" "အမျှင်နဲ့ ထမင်း"လို့ များဆိုလေမလားဘဲ။
ကျမတို့ ဆီက ခေါက်ဆိန့် က မြန်မာအခေါ် မုန့် တီဖတ်ပေါ့။ ဒီနေရာမှာကျမပြောချင်တဲ့ ခေါက်ဆွဲက ဆန်ခေါက်ဆွဲပါ။ သူ့ ကျတော့ "လှီးဖြတ်ထားတဲ့ထမင်း" ပေါ့..။
ဟင်းဟင်း...အင်းသား-ရှမ်းမ နဲ့ တွေ့ တော့ အခေါ်အဝေါ် အသုံးအနှုံးတွေလည်း ကပေါက်တိကပေါက်ချာ၊
ခေါက်ဆိန့် ကို ကျမတို့ နည်း၂ မျိုးနဲ့ ချက်စားတတ်ကြပါတယ်။
ပထမနည်းက ခေါက်ဆိန့် ဂျိန်း(မ်)(မုန့် တီဟင်းအချို)လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ ၊ကျိုင်းတုံမုန့် တီပေါ့။
ထဲ့စားတတ်တဲ့ အရွက်တွေကတော့ ရွှေပဲရွှက်၊လက်ပံပွင့်ခြောက်ပြုတ်၊ပဲပင်ပေါက်၊ကော်ဖီထုပ်ပါးပါးလှီးနဲ့ ၊
ကြက်သွန်မြိတ် နံနံပင် နှမ်းထောင်း (မုန့် တီပုဂံတခုလုံးရောင်စုံဖြစ်သွားတယ်)အဲလို..အမယ်အများကြီးပေါ့။
အရင်ကတော့ အလှုပွဲ ရှင်ပြုပွဲ တွေမှာ ဒီခေါက်ဆိန့် ဘဲကျွေးတာထုံးစံရှိပါတယ်။
ခုတော့ ကြက်ဆီထမင်းယဉ်ကျေးမှု့ တွေ အစားထိုးဝင်လာကြတယ်တဲ့။
အဒေါ်အိမ်ကချက်ကျွေးတဲ့ ခေါက်ဆိန့် (စားခါနီးဒါတ်ရိုက်တာစိတ်မပါဘူးလေ.အဟိ.)
နောက်တနည်းက ခေါက်ဆိန့် ကျန် လို့ ခေါ်တဲ့(မုန့် တီအပေါ့) ပါ။ သူကျတော့ ဟင်းအနှစ်မလိုဘဲ ဝက်အူခြောက်ကျွတ်ကျွတ်ကြော်(ဝက်အူတွေကိုနေလှမ်းပြီး ကျွတ်နေအောင်ကြော်ထားတာ)၊လေးကို အပေါ်ကနေဖြူးစားတာပါ။သူ့ အဓိကတော့ဝါထိန်နေတဲ့ ဆီချက်(နမ့်မန်းဖူး ဝက်ဆီနဲ့ ချက်တာ၊
ခဲပြစ်ပြစ်ကြီးပေါ့) နဲ့ ကျွတ်ကျွတ်ကြော်ထားတဲ့ကြက်သွန်မြိတ်ကြော်(ဒါလည်းနေလှမ်းပြီးပြန်ကြော်တာ)။
ဟင်းရည်အိုးလည်း ကြက်သွန်ဖြူနီဂျင်းနဲ့ ပြုတ်ထားတဲ့ ဝက်ရိုးပြုတ်ရည်အကြည်လေးပါ။
မုန့် ပွဲပြင်မှ အရွက်ထဲ့(ရာသီအလိုက်ပေါ့၊ဆောင်းတွင်းဆိုရင် ရွှေပဲရွက်နဲ့ )အဲဒီအပေါ်မှာ မုန့် ဖတ်ထည့်ပြီး ဟင်းရည်ခပ်တဲ့ ယောင်းမကြီးကြီးပေါ့ ဟင်းရည်တဇွန်းလောင်းထဲ့၊
ပြီးယောင်းမကိုအပေါ်ကနေ မှောက်အုပ်ပြီး အရည်တွေကို အိုးထဲပြန်လောင်းပါတယ်။
ဒီလို ၂ခါ ၃ခါလောက်လုပ်ပေးတယ်။ရှမ်းလိုတော့ "ထန်"တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ခေါက်ဆိန့် ခေါက်ဆွဲတွေထန်ဖို့ အတွက် ဟင်းရည်အိုးကိုအမြဲပွက်ပွက်ဆူအော်တည်ထားရတာပေါ့။
(ထန်တာလည်း မီးဖိုချောင်ရဲ့ ပညာပါဘဲ၊ဆိုင်တွေမှာဆို ပွက်နေတဲ့အလည်ကဆီမပါတဲ့အရည်နဲ့ ထန်ပြီး၊
နောက်ဆုံးဟင်းရည်ထဲ့ပေးခါနီးမှ ဘေးကဆီလေး အရိုးအသားလေး၊ သွေးခဲလေး၊
တွေကိုမွှေနှောက်ပြီးထဲ့ပေးတတ်ပါတယ်)ထန်မှဘဲ မုန့် ဖတ်လေးတွေလည်းအိပြီးပူပူလေး။
အဲ..ခေါက်ဆိန့် ကျန်အတွက်ဆိုရင် ဆီချက်တဇွန်းခပ်ထဲ့၊(ခဲနေတဲ့ဆီကအရည်ပျော်
ပြီးဝါဝင်းရောင်လေးထလို့ နဘေးကမုန့် ဖတ်တွေပေါ်စီးဆင်းသွားတယ်။ကျမက တူကိုင်ပြီး မျက်လုံးမမှိတ်တမ်း ကြည့်နေခဲ့ဖူးတယ်..လေ။ဟင်းဟင်း..ဒါငါ့အလှည့်ကွ ငါ့ပုဂံကွ...:P
ကြက်သွန်မိတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြော်လေးနဲနဲနဲ့ ဝက်အူကြော်နဲနဲပေါ့ ဖြူးပေးလိုက်တာဘဲ။
ပြီးမှ ကိုယ်လိုတဲ့ အပေါ့အငံအချဉ်အစပ်အတွက် ဆား၊ငရုပ်သီးမှုန့် လှော်၊သံပုရာသီး(ဈေးကြီးချိန်ဆိုရင် မန်ကျည်းသီးမှည့်ဖျော်ရည်နဲ့ ဘဲညားတာပေါ့လေ)..ဒီလောက်ပါဘဲ အင်မတန်မှ စားကောင်းတဲ့ခေါက်ဆိန့် ကျန်ပေါ့။အရင်တုံးကဆိုရင်တော့ ခေါက်ဆိန့် ဆိုင်နှဘေးမှာသားရေပွကြော်၊
ပဲကြော်(စားတော်ပဲ)အကြော်ဆိုင်ကအမြဲကပ်ရပ်ရှိတတ်တယ်။ဝက်ခေါက်ကြော်နဲ့ စားရင်လည်း အဆီမပါအခေါက်ချည်းဘဲဆို ပိုလိုက်ပါတယ်။နို့ မို့ ရင်လည်း ကောက်ညှင်းပေါင်းကို၊
အဲဒီဟင်းရည်မှာတို့ တို့ စားရင်လည်း၊ကောင်းမှကောင်းပေါ့။
ကျမငယ်ငယ်တုံးက ကျိုင်းတုံမဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးနှဘေးက ညောင်စောင့်နတ်ကွန်းနှဘေးကပ်ရပ် မှာ
ခေါက်ဆိန့် ကျန်ဆိုင်တဆိုင်ရှိတယ်။ သစ်သားထိုင်ခုံရှည်ပု လေးနဲ့ ၊
(အစွန်းမှာထိုင်မိရင် ဘေးကလူထသွားတဲ့အခါ ထိုင်ခုံမြောက်တက်သွားတတ်တယ်လေ..ဟီး)
ဆိုင်ရှင်က သူ့ ဟင်းအိုးမီးရှိန်လျော့ရင် ထင်းတုံးကြီးတစထပ်ထဲ့၊ပြောင်းတံကြီးနဲ့ တဖူးဖူးမှုတ်လို့ ၊မီးခိုးတွေ ကိုယ့်ဖက်ရောက်လာရင်တဟွတ်ဟွတ်နဲ့ မီးခိုးတွေသီး လက်လေးနဲ့ ခါ အစားမပြတ်ပါဘူး ကုန်းပြီးလွေးခဲ့တာဘဲ...တကယ်သတိရတယ်။
(ဒါတွေက ဟိုးအရင်ကလေးဘဝက စားခဲ့တဲ့ မယ်မီးရဲ့ ခေါက်ဆိန့် ကျန်စား အတွေ့ အကြုံပေါ့၊)
ခုတော့အားလုံးပြောင်းလဲ ကုန်ပါပြီ။ကျမတောင် တနှစ်တခါဘဲပြန်မှ စားရတယ်။
ခုကျိုင်းတုံမှာမနက်ဆိုရင် ဈေးကြီးထဲက အသားရုံပတ်ဝန်းကျင် မှာတဆိုင်တွေ့ တယ်။
ဆိုင်ကအလယ်တန်းဆိုတော့ ထိုင်စားနေရင် ကိုယ့်နောက်ကျော လူလာတိုးတာလည်းခံရတယ်။
ရှေ့ ကနေ ကိုယ်ကစားပြီးနှပ်တရှုပ်ရှုပ်နဲ့ သုပ်နေတာလည်း၊သူတို့ သွားရင်းလာရင်းတွေ့ နိုင်တယ်။
ဟီး..ကျမတော့တရက်အားတင်းပြီး သွားထိုင်စားခဲ့တယ်။မြို့ ကလူတွေက သိပ်စားလေ့မရှိဘူး။
အောက်က ဒါတ်ပုံကတော့ မှောင်မှောင်မဲမဲ ညောင်ပင်အောက်မှာစားတုံးက ။ကျန်တဲ့ပုံတွေက ဝါးနေတာ။
ညနေဖက်ဆိုရင်တော့ နောင်တုန်ကန်နားက ညောင်ပင်အောက်မှာ ရောင်းတယ်။ ၂ ဆိုင်ကပ်ရပ်။
တအားလူစည်တယ်။ကျမတော့ခဏခဏသွားစားတယ်။ခြင်ကတဝှီးဝှီး၊မှောင်မှောင်မဲမဲ (လက်တဖက်ကကုတ် အောက်ကဒူးကိုနန့် ပေးရတယ်လေ ခြင်မနားအောင်လို့ ...:)))
အဲဒါ ကျမတို့ ဒေသရဲ့ တကယ့်အရသာပေါ့နော်...။
၂၀၀၀ ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်က ရန်ကုန်စမ်းချောင်းဖက်ပဒုမ္မာကွင်းနားမှာ၊
ခေါက်ဆိန့် ကျန်ဆိုင်တဆိုင်ရှိခဲ့ဖူးတယ်။သူတို့ က ကြက်အူနဲ့ လုပ်တာပါ။
ဈေးနားမှာဝယ်စားတဲ့ခေါက်ဆိန့် ဂျိန်း(မ်)၊ခေါက်ဆွဲဖတ်နဲ့ တဝက်ဆီရောထားတယ်။
ကျိုင်းတုံရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရွာလေးတွေဖက်မှာတော့ ခေါက်ဆိန့် အစား ခေါက်ဆွဲကိုသုံးတာများတယ်။
ဟင်းရည်အိုးကလည်း လေးထောင့်ပုံး (ဆီပုံးဟောင်းကိုအသွင်ပြောင်းထားတာပေါ့) နဲ့ အုတ်ခဲတုံး ၃ တုံး၊
မီးခိုးတွေအူတက်နေတဲ့နေတာပေါ့။သူတို့ အခေါ်( ခေါက်ဆွဲ စို့ စို့ )တဲ့။
အသားကမယ်မယ်ရရ မပါပါဘူး။ ဟင်းအိုးတအိုးလုံးကို ဝက်သား သုံးထပ်သားလေးနဲနဲ ဝက်သွေးခဲနဲနဲ ကျဲကျဲ၊ခရမ်းချဉ်သီးဖတ်လေးတွေ ပေါလောပေါ်လို့ ။စားရင်လည်းမီးခိုးနံလေးနဲ့ ..ကျမတော့၊
စားလို့ ကောင်းခဲ့တာဘဲ။(ရန်ကုန်က မုန့် ဟင်းခါးဆိုင်လိုပေါ့ ရွာတိုင်းရှိတယ်)။
ခေါက်ဆွဲကျန်ကတော့ ထိုင်းက ကွေ့ သယိုနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပေါ့။
ကျမတို့ ဆီက ဝက်သား တတုံးကိုဟင်းရည်အိုးထဲထဲ့ပြုတ်လိုက်တာဘဲ။နူးမှဆယ်ပြီး ပါးပါးလေးလှီး ခေါက်ဆွဲထန်ပြီး အပေါ်ကနေ အသားလေးထဲ့ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်လေး ဆား၊ငရုပ်သီး၊
ကျမ တောင်ကြီး ရန်ကုန် မန္တလေး ရောက်မှ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ၊ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရနဲ့ ဆန်ဆီးဆန်ဖွယ်မြီးရှည်၊
ဆိုတာကြားဖူး၊မြင်ဖူး၊စားဖူးတာ။ကျမတို့ စားတာနဲ့ ကွာတာကိုး။ထိုဖူးချဉ်တွေ(သူတို့ အခေါ်ဆီထိုဖူး)၊
ထဲ့ချက်တာ၊ထိုဖူးနွေးထဲအသားထဲ့တာဆိုရင် အရမ်းအံသြဘဲ။သြော်...တကျောင်းတရွာ တဂါထာ ဆိုတာပေါ့နော်။
ကျမတို့ ဖက်မှာ ခေါက်ဆွဲကို ကိုယ်တိုင်(homemade) လုပ်တာကိုး..။ပြီး ကပ်ကျေးနဲ့ ညှပ်တာလေ။
နောက်မှစက်ကြီးတွေပေါ်လာပြီး စက်နဲ့ ညှပ် စက်လုပ်ခေါက်ဆွဲ တွေဖြစ်လာကြတယ်။
ကျမတော့ တောခေါက်ဆွဲ လက်ညှပ်ဘဲကြိုက်တယ်။ဆီသိပ်မပါဘူး။
စက်လုပ်တွေက ဆီတွေမှတထောကြီး။(ရန်ကုန်မှာ ဆန်မုန့် ကိုအချဉ်ဖေါက်ပြီးလုပ်တာလားမသိဘူး။
ချဉ်စော်နံရတယ်လို့ ခံစားမိတယ်။)ကျမတို့ ဖက်က နံဘူးဗျို့အာမခံတယ်။ရောက်ရင်ဝယ်စားကြနော်။
ကျမ နဲ့ စာအပြန်အလှန်ရေးရင်းသိတဲ့မိတ်ဆွေ လော(လာအို) ကရှမ်းအစားအစာဘလောက်
ရန်ကုန်ပြည်လမ်းပေါ်မှာအသစ်ဖွင့်တဲ့ Citymart Mall ဆိုလားဘဲ၊ညီမလေးဝမ်းကွဲပြောပြတာ။
အဲဒီအောက်ထပ်မှာ ခေါက်ဆိန့် ၂ မျိုးလုံးရတယ်တဲ့။ကျမရောက်သွားတုံးက ကားရပ်စရာမရှိ ကားကြပ်၊
တော်တော့်ကို အဆင်မပြေဖြစ်တာနဲ့ မစားလိုက်ရဘူး။
ကဲ..ဒီနေ့ တော့ ခေါက်ဆိန့် ခေါက်ဆွဲ နဲ့ ဘဲတခန်းရပ်လိုက်အုံးမယ်။
နောက်တခါကျတော့ ဆန်ထိုဖူး မြေပဲထိုဖူး (ပဲပိစပ်)ထိုဖူး မြားမြောင်လှစွာသောထိုဖူးသုပ်မျိုးစုံနဲ့ ၊
Posted by မီးမီးငယ် at 11:36 AM
fredfromnyc July 03, 2012 2:32 PM
မီးမီးငယ် July 05, 2012 7:03 PM
Sure,all are my breakfast when I was there...
စူးနှယျလေး July 03, 2012 3:51 PM
အဒေါ်အိမ်ကချက်ပေးတာ ကောင်းမယ့်ပုံပဲ..စမ်းချောင်းပဒုမ္ပာကွင်းနားကဟာ စားဖူးခဲ့တယ် ဟုတ်တယ် ခုမရှိတော့ဘူး...။ လက်ပံပွင့်ခြောက်ရှိတယ် ပဲပုပ်ရှိတယ်.. ချက်စားချင်လာပြီ :)
မီးမီးငယ် July 05, 2012 7:07 PM
မွန်မွန်ုယိုကို July 04, 2012 1:38 PM
အောင်ညန်.လေး ထမင်းစားပီးကြည်.လဲ ချားချင်တာပဲ မမီးမီးရေ။ခေါက်ဆွဲဆိုတာနဲ. တအားကြိုက်။ ငမ်းသွားတယ်နော်။ ရှလွတ်ရှလွတ်............
မီးမီးငယ် July 05, 2012 7:08 PM
Cameron July 05, 2012 11:25 AM
စားချင်လိုက်တာ မမမီးမီးရယ်...ပုံတွေကြည့်ပြီးသရေကျရတယ်...။ မြေပဲတိုဖူးကို အရမ်းစားချင်နေတာ ဘယ်သူ့မှမှာလို့မရဘူး...။ ခေါက်ဆွဲကို ၀ါးတန်းပေါ်တင်ထားတာကြည့်ပြီး ငယ်တုန်းက တာလေမှာ ခေါက်ဆွဲကို အဲဒီဖိုအထိပူပူနွေးနွေးသွားဝယ်ပြီးငံပြာရည်ထဲ သံပုရာသီးညှစ်ပြီး ဒီတိုင်းတို့စားတာကို သွားသတိရမိတယ်...။
မီးမီးငယ် July 05, 2012 7:11 PM
မိုးငွေ့........ has leftanew comment on your post
(မိုးငွေ့ ပေးတဲ့ကော်မန့် ကအီးမေးထဲရောက်လာပေမဲ့၊ဒီမှာပေါ်ဘူးဟယ်။
မီးမီးငယ် July 05, 2012 7:15 PM
မြေပဲထိုဖူးကဆန်မုန့် တချိုး မြေပဲ၃ချိုးနဲ့ ကြိတ်တယ်လို့ တော့၊
ပဲငံပြာရည် မြေပဲဆန်ထောင်း ငရုပ်သီးဆီချက်နဲ့ တို့ စားကြတယ်။
Anonymous July 06, 2012 2:02 AM
မနေ့ ကရှမ်းပြည်ကသူငယ်ချင်းကရှမ်းခေါက်ဆွဲလုပ်ထားတယ်လာခဲ့ပါဆိုတာနဲ့ သွားစားဖြစ်တော့ မီးမီးနဲ့ ကျူတီကိုသတိရနေတာ။ သူငယ်ချင်းရဲ့ လာအိုသူငယ်ချင်းလည်းလာပြီးအရည်ရောအသုပ်တွေရောအားပေးသွားတယ်။ သူ့ သမီးလေးပါလာလို့ ကြာကြာမနေနုိုင်တာနဲ့ ခေါက်ဆွဲတွေအကြောင်းတောင်မမေးလိုက်ရဘူး။း)
မီးမီးငယ် July 06, 2012 5:36 PM
လာအိုမှာနေတဲ့ရှမ်းတွေကိုထိုင်းတွေက ရှမ်းလေး(ထိုင်းနွဲ့ )လို့ ခေါ်တယ်။
San San Htun July 07, 2012 7:21 PM
မီးမီးငယ် July 08, 2012 8:56 AM
မောင်သီဟ July 09, 2012 9:20 AM
ခက်တာက ပုံတွေကြည့်ပြီး တံတွေးမျိုးရ ဟင့်း)
မီးမီးငယ် July 10, 2012 2:19 PM
ရှမ်းမင်းသား March 11, 2013 6:14 AM
ဟေ့ ငါ့ဟာ လေး တင် ပေး အုန်း ဟ